Ilkaha Daryeelka | Way Best inay Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn
Way Best inay Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn
ilkaha u caddayn , Ilkaha caddeeyo , waxyaabaha Tooth caddeeyo
Home ku saleysan in Ilkaha caddeeya aanu u caddayn
Caddeeya aanu u caddayn Talooyin Ilkaha
Posts tagged "daryeelka ilkaha"
Easy, Siyaabaha jaban Si iftiimin Your Smile
Ma jiraa hab amaan ah si aad u hesho dhoola caddaan? Ma aha oo dhan ee ugu wanaagsan ama la aamini karo. Maqaalkani waxa uu ku siin doonaa qaar ka mid ah ilkaha u fiican leh daryeelka iyo xasilloonaan.
Tallaabada ugu horreysa ee caddaan, ilkaha ifaya waa wanaagsan yahay a, nadiifinta xirfadeed. nadiifinta ilkaha waa in ay sida caadiga ah u, halkaas oo aad ballan kasta oo lixdii biloodba mar. Si kastaba ha ahaatee, nadiifinta xirfadeed oo joogto ah waa u fududahay in ay iska eafiya iskana laakiin waxaa caadi ahaan daboola noocyada ugu badan ee caymiska ilkaha.
TALO! Ka dib marka aad u caddayn ilkaha, taxaddar waxa aad cabto ama cuno. Waxay u nuugo doonaa Wasaqda iyo midabkiinaba, in ka badan si fudud oo keeni karo midab.
caddeeyo Laser waa mid ka mid ah habka ugu fiican ee soo saari kara natiijo deg deg ah. Tani waxay noqon doontaa sida ugu fiican ee ilka dhabarkaaga noqon in ay caddaan hore sida ay ku noqon karaan. xal bleaching A waa indha tiray on ilkaha, markaas laser la isticmaalay si loo kiciyo. ilkaha The dhakhso waa ugu yaraan shan ama lix midabo.
Waxaa muhiim ah inaad ku darto miraha iyo khudaarta cayriin ee cuntada, si ay u caawiyaan ilkaha sii xoog leh oo caafimaad. cuntooyinka dufan loo kordhiyo fursad ah godadka iyo waxay keeni kartaa midab of ilkaha. Iska ilaali noocyada kala duwan ee cuntada sababtoo ah waa dhaawici caafimaadka ilkaha. Sidoo kale waa inaad ka fogaato si joogto ah cuna marka aan gaarno dhoola caafimaad.
TALO! Ka fogow cabitaanka ilko-xayd haddii aad raadineyso weeyna ilkaha cad. Noocyadaas sharaabka Coca Cola waxaa ka mid ah, qaxwada iyo shaaha madow.
Waxaad u baahan tahay in aad u taxaddar marka cunaya ama cabaya ka dib markii ilkaha ah Nuuri. ilkaha caddaaday si fudud u nuugo doonaa midabo kala duwan ama Wasaqda ka cunto iyo cabitaan. Ka dheerow cuntooyinka iyo sharaabka madow ama xayd ka dib markii aan lahaa aad ilkaha ayaa la caddadeen. Coffee waa tusaale ka mid ah wax la Tagnana doonaa ilkaha oo waxaan ka dhigi wax isbedel midab ah.
Isku day inaad la cabbo iyada oo kale caws buu si uu kaaga caawiyo ilkaha sii cad oo dhalaalaya. Isticmaalka kale caws buu u dhigaysa in ay yar tahay in sharaabka aad baabbi'in wasakheeyey ilkaha. dareeraha ah ayaa la dhaafayo doonaa ilkaha oo waxaad tagtaa hunguriga.
TALO! caddeeyo A xirfadeed laga yaabaa inay qaali, laakiin waa laga yaabaa in sida ugu wanaagsan ee ay u bilaabaan caddeeyo ilkaha. Iyadoo habkan waa mid qaali ah, waxay bixisaa waayo-aragnimo fiican oo dhakhso badan caddeeyo hababka kale.
Strips ilkaha caddeeya waa iska diyaar meel kasta oo ay sidoo kale si cadaalad jaban. strips Kuwani shaqeeyaan by nadiifinta Wasaqda dusha ka ilkahaaga iyo kiimikada ay daaweeyaa strips them.Whitening caddeeya ayaa laga badiyay caan dhawaan, maxaa yeelay, iyagu ma ay siin natiijada ugu wanaagsan.
Waxaa aad muhiim u ah in mar kasta oo aad ilkaha Nuuri waa, ka dib kasta oo hadhuudh ah waa in aad cadaydo ilkahaaga. Qurub cunto Haraaga waxay keeni kartaa in koritaanka bakteeriyada on dusha sare ee ilkaha. Haddii aadan ogolaan ilkaha in ay dib ka qallafin, ilaa, bakteeriyada waxay keeni kartaa badan oo dhibaatooyin, si loo hubiyo in aad cadaydo.
TALO! Marka aad ku sugan tahay u baahan dhoola cad isla markiiba, aad u baahan tahay si ay u booqdaan dhakhtarka ilkaha isla markiiba. Mar kasta oo aad isku daydo inaad hesho dhoola caddaan, aad halis u ah oo keeni karo dhib halkii isbeddel wanaagsan.
Waa in aad lacag bixisid si aad dareen kasta oo la caddeeyo daawaynta dareenka. Waxa ay noqon karaan kuwo xanuun badan oo laga yaabaa in waqti gaaban laakiin weli xanuun. Haddii ay taasi dhacdo, hubi in aad arakto dhakhtarka ilkaha ka hor inta aadan sii wadi isticmaalka sheyga caddeeyo. Waxa uu u ogaado oo ku saabsan doorasho oo kala duwan oo aan kuu saameyn doono in ilkaha.
ha Sigaarka iyo ilkaha caddeeyo ma wada shaqeeyaan. Haddii aad rabto in aad ilkaha cad u qurux badan, waxaad u baahan doontaa in aad joojiso sigaarka. Marka aad lacagta ku bixiyaan daaweyn caddeeyo oo sii sigaarka, waa baabba 'oo lacag ah. All shaqada si ay u caddayn ilkaha lagu lumin doonaa marka aad sigaarka cabto.
TALO! Ka hor inta ilkaha laga bilaabo caddeeyo, la dhakhtarkaaga ilkaha kala hadal. Haddii aad og tahay in aad u baahan doontaa shaqo ilkaha waaweyn sameeyo mustaqbalka dhow, raagin ilkaha caddeeyo nidaamka ilaa uu shuqulkii la soo dhameeyay.
Ka dhig caday hal isticmaalka a iska guriguu dhigtay marka aad cuni nacnac ama macmacaan kale. Waxaa laga yaabaa in cuntooyinkaasi ku dhegeen ilkaha si fudud, iyo bilaabi kartaa iyaga dhaawac. Ka dib marka aad wax macaan riyaaqay, qaadan a daqiiqad ama laba si aad ilkaha. Cajiinka ilkaha looma baahna haddii aad si fiican u xoq ilkaha iyo iyaga si fiican u biyo raaci.
Caday la cadayga ilkaha ah caddeeyo. Inkastoo cadeyga kuwanu ma sidii awood sida whiteners kale, ay ka saari doonaan wax ka Wasaqda ugu danbeeyay iyo ilkaha ka Wasaqda cusub ilaaliyo. cadeyga waxa ku jira hadal haynta khafiif ah ee silica in ka shaqeeyaan iyada oo aan waxyeelo u dhaldhalaalka doonaa dhigay.
TALO! Waa muhiim in la cadaydo, massage xanjo, iyo jeer xadhigga maalintii ugu yaraan. Ilkahaaguna sii joogi doonaa badan sii caddaan doonaa haddii aad cadaydo iyo xadhigga mar kasta oo aad cunto ama cunto fudud.
Raaci afkaaga ka dib aad cabto ama la cabbo. Ilkahaaguna sii joogi doono caddaan doonaa haddii aan waxba leedahay waqti si ay u nadiifiso ka dib gubaya cunto ama cabitaan. Tani waxay kaa caawin karaan in ay ka hortagaan Wasaqda iyo godadka.
Isticmaalka ilko caddeeyo qalimaan kaa caawin karaa inaad u caddayn ilkaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in ay si taxadar leh oo ku saabsan iyaga oo isticmaalaya, maxaa yeelay, waxay u shaqeeyaan sida bleach. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican ka habkan, aad u baahan tahay si aad u codsato daryeel iyo ka fogaato waxa overdoing.
TALO! Qaar ka mid ah cadeyga caddeeyo ma aha waxay dhammu odhan ay yihiin. Waxaa laga yaabaa inay ku caawiyaan in ay u caddayn ilkaha, laakiin waxaa ugu wanaagsan ee lala isticmaalaa xeeladaha kale.
Waxaad doonaysaa in ay u tagaan dhakhtarka ilkaha si aad u hesho ilkaha la nadiifiyaa ugu yaraan laba jeer sanad kasta. Weydii xafiiska si aad u soo xiriir ah oo ku saabsan hal usbuuc ka hor ballantaada dhow yahay.
La hadal dhakhtarkaaga ilkaha oo ku saabsan siyaabaha caafimaadka si caddeeya aanu u caddayn ilkaha ka hor inta iibsashada wax. Takhtarkaaga ilkuhu wuxuu kuu sheegi karaa waxa ugu fiican xaaladaada iyo inaad ugu Digtid Maka ku saabsan waxyeelo.
TALO! Dhis floss galay aad regimin. Findhicilashada on joogta ah maalin walba waxay caawisaa in laga takhaluso afkaaga of huurada, taas oo ah mid ka mid ah sababaha midab ilkaha.
biyo la cabo inta badan kaa caawin doonaa ilkaha caddaan. Biyo ku mayrin waa hab fiican si looga hortago Wasaqda ka appearing.Make caado inay biyo ka cabbaan cuntada aad cunto iyo inta lagu jiro.
Khamri iyo soda waa cadowgaaga in aad baaris ilkaha cad. cabitaanka Kuwani u yeeli karaan ama discolor ilkaha. iyaga waxaa la jiray cabitaan caafimaad beddel. Haddii aad rabto in aad cabin cabbitaanada la sugayo, hubi in aad ilkaha cadaydo sida ugu dhakhsaha badan si loo yareeyo saamaynta xayd ah.
TALO! jilif ee geed walnut waxaa loo isticmaali karaa si tartiib ah iska xoqin Wasaqda on ilkaha. Isticmaalka jilif this on joogto ah ka saari kara kuwan Wasaqda iyo midab huruud ah caadi ahaan waxaa laga arki jiray isticmaalka tubaakada ama ka cabbo sharaabka qaarkood.
Miraha iyo khudaar la joogtona ah buunshada loo isticmaali karaa si dabiici ah xoqin ilkaha. Qaar ka mid ah cuntooyinka in shaqayn doonaa waa broccoli, qajaar, karootada, iyo karootada. Isku day in aad swish cuntada waa in afkaaga in goobta dheeraad ah oo ku daboolay.
Dur waxyaabaha caanaha ka badan aad cunto. Strong, ilko caafimaad ayaa loo saarin karaa in ay nafaqo ee cuntada sida yogurt, caano iyo jiis. macdanta waxa kale oo loo hagaajiyo dhaldhalaalka ee ilkaha, taas oo ka dhigaysa ilkaha ka yar u nugul in ay cuntada iyo waxyaabo kale oo caadi ahaan keeni midab. Taas macnaheedu waa in ay ka mid yihiin cuntada sida, kuwaas oo aad cunto kaa caawin doona inaad leedahay dhoola in uu yahay caddaan.
TALO! daawooyinka Home loo helo ilkaha caddaan u muuqdaan in ay leeyihiin koox hoos–waxay mararka qaarkood keeni kartaa in xasaasi ah, cirridka oo barara in waxaa waajib ah in dhiig. Ha ka waaban inaad la tasho dhakhtarka ilkaha haddii aad isku aragtid wax ka mid ah, kuwaas oo arrimo ilkaha.
Bakteeriyada kori doono ku dhawaad ​​afkaaga ka dib waxa aad cuni. Haddii aadan ogolaan ilkaha in ay dib ka qallafin, ilaa, bakteeriyada waxay keeni kartaa badan oo dhibaatooyin, si xasuuso inaad iyaga cadaydo.
Iska ilaali cabitaanada iyo miraha mugdiga si ay u ilaaliyaan ilkaha cad. cabitaanada qaarkood, sida khamri ah cas iyo kafeega, tegi karo Wasaqda on ilkaha. Haddii aad si fudud u ma siin karaan cabitaanada kuwan, SIP dhex tuubo si aad u garab saamayn xayd ah.
TALO! Si aad u caddayn ilkaha aad si fudud iyaga cadaydo kara Jinka haydarojiin iyo baking soda. Labada waxyaalahaas yihiin maaddooyinka ku jira ugu cadeyga caddeeyo ganacsi, Oo haddana waxay laga heli karaa aad bakhaar guriga.
Waxyaabahani waxay keeni kartaa Wasaqda qoto dheer in ilkaha. Haddii ay noqoto in aad cabto kafeega ama shaaha, waxaad isticmaali kartaa tuubo si aad u iyaga ka waraabin, cadaydo ilkahaaga dib markii ay kaalinta koob aad, ama ilkaha buraashka isla markiiba ka dib marka la dhammeeyo cabniinka. Cabitaanka shaaha iyo kafeega, oo ay la socdaan sigaarka, waa qayb weyn oo discoloring ilkaha dadka.
Isticmaal dawo dabiici ah in ay u caddayn ilkaha, sida khal cider tufaax. Tani ayaa la sheegay inay ka soo saarto Wasaqda iyo baabi'iyo bakteeriyada in kuwa afka. Si aad wax ku ool ah oo la daaweynta, maalin luqluqo khalka, subaxdii waxaa quman, ka dibna waxa ay dabagal la cadayashada ilkaha ah.
TALO! Dooro caday saxda ah. La hadal dhakhtarkaaga ilkaha si aad u hesho isaga ama iyada talo ku saabsan waxa cadayga waa in aad doorato.
Ilkaha Dabiiciga ah
Waxaa jira whiteners ilkaha dabiiciga ah in aad laga yaabaa in la helo dibadda halkii iyaga iibsashada, sidaas aad badbaadinayo lacag. jilif ee geed walnut yahay daaweyn heer sare ah loo isticmaalo si ay u caddayn ilkaha. Hel jilif ka geed, waxaa raaci si fiican iyo ilkaha xoqin la. Tani waxay ka shaqeeya in ay ka saarto Wasaqda iyo huurada.
Waa in aad ogaato in xal kasta oo la caddeeyo oo kaliya u caddayn ilkaha dabiiciga ah. Haddii aad hantiyi biraha, sida taaj, buuxinta, biraha ama noocyada kale ee shaqada ilkaha on ilkaha hore hore, waxay sii joogi doono midab isku mid ah. Caddeeyo ilkaha dabiiciga ah waxay keeni kartaa shaqo ilkaha in la sameeyo laalaadin weyn.
Kala tasho dhakhtarka ilkaha ama ilkaha ka hor doorashada si ay u caddayn ilkaha. Ha bilaabin caddeeyo ilkaha haddii aad leedahay in la sameeyo arrimaha kale.
caba A waa u fududahay in ay goobjooga u wacan in kuwa Wasaqda jaalaha on ilkaha. Waxay noqon kartaa halkii ay adag tahay in la sii dhoola cad haddii aad sigaar cabto. Haddii aad qabto in sigaar, waa in aad la gooyaa dib u ah caafimaadkaaga iyo muuqaalka kore ee ilkaha.
Isticmaal kooxda hoose diirka liin ayaa ah in la soo marmariyo Wasaqda iyo ka dhigi ilkaha caddaan. Waxaad sidoo kale isku daraan qalajiyey karaa qolofka orange iyo gacanka dhulka ka dhigeysa in la sameeyo toothpaste.Make ah leedahay beduliyum hubi inaad afkaaga marka aad dhammeysato cadayashada in meesha laga saaro oo dhan sonkorta miro dheeraad raaci.
Ka dheerow ka luqluqdo midab sida ay ku jiraan colors.Mouthwashes daray ay ku jiraan formaldehyde ku darto midabka keeni kartaa midab aan la rabin in ay u muuqdaan on ilkaha.
Caday aad ilkaha waa qiyaas wanaagsan difaaca. Waxaad had iyo jeer ka heli kartaa qaar ka mid ah daawada cadayga si gaar ah ka dhigay inay u caddayn ilkaha. Waxaa jira wax badan oo noocyo kala duwan, si iyaga cilmi kaa caawin kara inaad mid u shaqeeya ilkaha ka heli.
Isku day hagaajinta aad neefta si aad u hesho dhoola caddaan. Tijaabi in aad neefta by leefo qayb nadiif ah oo aad gacanta ku. Haddii aad uriso karaa candhuufta, isticmaalaan, reexaanta ah ama qaar ka mid ah dawo luqluqasho. Haddii aad tagto iyada oo dawo luqluqasho, loo hubiyo in ay tahay khamri-free si looga fogaado qalajiyo afkaaga.
ilkaha la caddeeyo oo dhalisay dood xad ah. Waxaa la rajeynayaa in ka dib markii reading this article in aad dareemi doontaa kalsooni badan fulinta qaar ka mid ah fikradaha lagu soo bandhigay for caddeeyo ilkaha. Isticmaal macluumaadkan si ay si ammaan ah aad u hagaajisid midabka ilkaha.
Posted by Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn - June 5, 2016 at 12:56 AM
Categories: Home ku saleysan in Ilkaha caddeeya aanu u caddayn Tags: nuugo Wasaqda, Iftiimin Your Smile, nadiifinta ilkaha, ilkaha Laser caddeeyo, daryeelka ilkaha, ilkaha cad, Talooyin cad ilkaha, caddeeya aanu u caddayn ilkaha, dhoola caddaan
Kalsooni In Your Smile iyo Ilkaha White
Advice shaqeeya Marka rabnaa in aad caddayn Ilkaha Your
Caddeeyo Talooyin Ilkaha waxaad isku dayi kartaa Out Maanta!
Tuur Taasi Yellow daawo Hel A Smile White Bright
Dhig Smile yaabtid Iyadoo Talooyin Kuwani
nuugo Wasaqda baking soda dhoola quruxda habka ugu wanaagsan ee ay u caddayn ilkaha Iftiimin Your Smile Nuurkii of dhoolla Smile White Bright Smile yaabtid nadiifinta ilkaha qolkii ilkaha ee Hel A Smile Bright White ilkaha guriga caddeeyo caddeeyo guriga sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha ilkaha laser caddeeyo ilkaha Laser caddeeyo hab dabiici ah in ay u caddayn ilkaha saar midab Saar Uskag Ilkaha yaabtid Smile strawberry Xirmada bleaching ilkaha ilkaha dhalaal daryeelka ilkaha ilko caafimaad Uskag Ilkaha ilkaha caddeeyo ilkaha huruud ah Talooyin looga Hortagayo Uskag Ilkaha cadayga waxyaabaha Tooth caddeeyo Vitamin C Caddeeyo Talooyin Ilkaha waxaad isku dayi kartaa Out Maanta! caddeeyo ilkaha ilkahayga ku caddeeya aanu u caddayn ilkaha caddeeya ilkaha caddeeya guriga caddeeya aanu u caddayn ilkaha Caddeeya aanu u caddayn Ilkaha Your Easy dhoola caddaan ilkaha cad la dhalaalayay ilkaha cad Talooyin cad ilkaha Yellow daawo,
Theme WordPress by HeatMapTheme.com